Yesmail na-agbakwunye mpụga Email na-akpali maka egwuregwu na ihu igwe | Martech Zone
Yesmail na-agbakwunye mpụga Email na-akpali maka egwuregwu na ihu igwe
Dị ka ndị na-ere ahịa, anyị na-echekarị banyere data na omume ndị ahịa dịka mpaghara dị ka afọ, koodu nzi ozi, na onye nwe ụlọ. Agbanyeghị, anyị na-atụfu uche na ntanetị nke ihe na-eme na ndụ ndị ahịa. Ihe omume dị mfe dịka mgbanwe ihu igwe nwere ike ịgbanwe akparamàgwà na omume ịzụ ahịa. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na snow na-aga, anyị nwere ike ịzụrụ taya ọhụrụ ma ọ bụ ihe na-eme ka anyị nwee ebe anyị na-agbafe.
Ezubere iche, nke oge, na nkwukọrịta dị mkpa na-enweta nkwekọrịta kachasị elu nke ndị ahịa. Mgbasa ozi a na-akpali akpali dabara na ndị nkọwa a niile ma na-enweta oge 2.5 ugboro ole a na-emeghe mkpọsa azụmahịa-na-emebu, na ọnụọgụ abụọ ha. Agbanyeghị, ndị na - ere ahịa ka na - agbasi mgba ike ịtọlite ​​ma na - agbasa ozi ọhụụ. Yesmail ịkpalite ọgụgụ isi na-enye ndị na-ere ahịa ohere iji ikike nke ọnọdụ ihu igwe na ihe egwuregwu na-eme ka ntọala wepụta mkpọsa email na-ekwu maka ọdịmma ndị debanyere aha ha, ọnọdụ, na gburugburu ebe obibi, n'oge.
Dịka, ndị na-enye ọrụ email na-eme ka onye ahịa nweta ọrụ maka mmemme mmemme na-ebute site na iji njikwa mmemme nke ngwa ha. Ọ dị mma ịhụ Yesmail ịkpalite ọgụgụ isi awa, na-eme ka ọ dịkarịrị mfe maka nkezi azụmahịa ịmekọrịta ihe omume na-ebute mkpọsa n'ime ngwakọta ahịa ha.
Na-akpali ọgụgụ isi maka ihu igwe
Akpalite ọgụgụ isi maka ihu igwe na-enyere ndị ahịa aka ịhazi mkpọsa ozi-e na-etinye ndokwa mgbe ọnọdụ ihu igwe edoziri tupu emee n'otu ọnọdụ mpaghara. Weather nzacha gụnyere:
Ogologo ikuku ikuku
Ọnọdụ ihu igwe: urukpuru, igwe ojii, mmiri ozuzo, akụ mmiri igwe, mmiri ozuzo, snow, anwụ na-acha, égbè eluigwe
Akpalite ọgụgụ isi maka egwuregwu
Akpalite ọgụgụ isi maka Egwuregwu na-enye ndị ahịa ikike ịhazi nkwukọrịta email nke na-etinye mgbe ihe omume egwuregwu pụrụ iche pụtara. Egwuregwu nzacha gụnyere:
Oge (ngwụcha egwuregwu, ọkara oge, nkeji iri na ise / oge)
Nsonaazụ ikpeazụ (mmeri / ọnwụ)
Ihe edere (mgbe aka 5 gasịrị, mgbe ihe mgbaru ọsọ 1st, mgbe nkata 100, wdg)
Tags: email akpaliteEgwuregwu email na-ebuteihu igwe email na-akpalieeeemailmail na-ebuteeeheemail na-ebute ọgụgụ isi
Kasị Mma Social ringkekọrịta Button ngwa mgbakwunye maka WordPress